Warar - Faahfaahin kooban oo ah taageere EC ah
EC fan waa shey cusub oo ku jira warshadaha taageereyaasha. Way ka duwan tahay taageerayaasha kale ee DC. Kaliya ma isticmaali karto korantada korantada DC, laakiin sidoo kale korontada korantada AC. Danab ka DC 12v, 24v, 48v, in AC 110V, 380V noqon kartaa mid caalami ah, looma baahna in lagu daro wax beddelaad rogaal celiyaha. Dhamaan matoorrada leh eber ka kooban qaybaha gudaha waa korontada DC, oo lagu dhisay DC ilaa AC, jawaab celinta rotor, seddex waji AC, magnet joogto ah, matoorro isku mid ah.
Faa'iidooyinka taageerayaasha EC:
Mashiinka EC waa matoor DC ah oo bilaa qalab ah oo dayactir la'aan ah oo leh aaladda xakamaynta caqliga leh. Waxay la timaaddaa RS485 interface interface, 0-10V interface saarka waxsoosaarka, 4-20mA xawaaraha xakamaynta qalabka wax soo saarka, qalabka soo saarida qalabka qalabka digniinta iyo istiraatiijiga soosaarka astaamaha. Badeecadu waxay leedahay astaamaha sirdoonka sare, keydinta tamarta sare, waxtarka sare, nolosha dheer, gariirka yar, buuqa yar iyo shaqada joogtada ah iyo kala go 'la'aanta:
Mashiinka DC-ka ee aan burushka lahayn ayaa si weyn u fududeeyay qaab-dhismeedka maxaa yeelay giraanta aruuriyaha iyo burushyada kicinta ayaa laga dhaafay. Isla mar ahaantaana, ma aha oo kaliya soosaarida mootada ayaa la hagaajiyaa, laakiin kalsoonida farsamo ee howlaha mootada ayaa si weyn kor loogu qaaday, nolosha adeegana waa la kordhiyay.
Isla mar ahaantaana, cufnaanta hawada magnet ee farqiga ayaa si weyn loo hagaajin karaa, iyo tusmada mootada ayaa gaari karta naqshadeynta ugu fiican. Saamaynta tooska ah ayaa ah in mugga mootada la dhimay oo culeyska la dhimay. Intaas oo kaliya maahan, marka lala barbardhigo matoorrada kale, waxay sidoo kale leedahay waxqabad xakameyn heer sare ah. Tani waa sababta oo ah: Marka hore, waxqabadka sare ee qalabka magnetka joogtada ah, isdabajooga joogtada ah, saamiga tamarta, iyo cufnaanta awoodda mootada ayaa si weyn loo hagaajiyay. Iyada oo loo marayo naqshad macquul ah, tusmooyinka sida daqiiqad aan firfircooneyn, koronto iyo farsamoyaqaanno joogteyn kara si weyn ayaa loo yareyn karaa, maaddaama tusmooyinka muhiimka ah ee waxqabadka koontaroolka adeegga si weyn loo hagaajiyay. Marka labaad, qaabeynta wareegga magnet-ka ee magnet-ka casriga ah waa mid dhammaystiran, isla markaana wada-jirka maaddada magnetka joogtada ahi wuu sarreeyaa, sidaa darteed falcelinta ka-hortagga-armature iyo awoodda anti-demagnetization ee matoorka magnetka joogtada ah ayaa si weyn kor loogu qaaday. Saamaynta khalkhalka ayaa si weyn loo dhimay. Seddexaad, maxaa yeelay magnets joogto ah ayaa loo isticmaalaa halkii laga kicin lahaa korantada, naqshadeynta qulqulka kicinta iyo maqnaanshaha magnetic excert waa la dhimay, iyo xaddidaadyo badan sida qulqulka qulqulka, kicinta kicinta kicinta, iyo qulqulka qulqulka ayaa yaraaday, taas oo si toos ah u yareyneysa doorsoomayaasha xakamaynta xuduudaha Iyadoo lagu saleynayo arrimaha kor ku xusan, waxaa la dhihi karaa in matoorka magnetka joogtada ahi uu leeyahay xakameyn heer sare ah.
Ilaalada Fan Birta, Ilaalada Fan caaga, Hvac Fan Puller, 172mm Ac Axial Fan, Taageerada Birta solay 80mm, 12cm Ac Axial Fan,